Maka: i-imeyili ephendulayo yeselula » Martech Zone
Maka: i-imeyili ephendulayo yeselula
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Ekupheleni kwalo nyaka, abantu abadala baseMelika abangaphezu kwama-80% bazoba ne-smartphone. Amadivayisi eselula alawula izingqimba ze-B2B ne-B2C futhi ukusetshenziswa kwawo kulawula ukumaketha. Konke esikwenzayo manje kunengxenye yeselula ekufanele siyifake kumasu ethu wokumaketha. Kuyini ukumakethwa kwamaselula Ukumaketha okukhangiswayo noma okukhona ngeselula, njenge-smart phone. Ukumaketha kwamaselula kunganikeza amakhasimende isikhathi nendawo
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Akukho lutho olungidumaza kakhulu njengalapho ngivula i-imeyili engiyilangazelele kuselula yami futhi angikwazi ukuyifunda. Kuphakathi kokuthi izithombe zinobubanzi obunamakhodi aqinile ezingaphenduli ekubonisweni, noma umbhalo ubanzi kangangoba kungadingeka ukuthi ngiphenye ngibuyele emuva ngiwufunde. Ngaphandle kokuthi kubalulekile, angilindi ukubuyela kudeskithophu yami ukuze ngiyifunde. Ngiyayisusa.